Su'aalaha la isweydiiyo - ZHONGHUI WAXQABADKA WAXQABADKA (JINAN) CO., LTD
SU'AALO BADAN LA IS WEYDIIYO
1. Maxaad ugu Dooratay Dhagaxa Dhagaxa Mashiinnada iyo Qaybaha Metroolojiyadda?
Granite waa nooc ka mid ah dhagaxa dhagaxa ah ee loo qoday xooggiisa xad -dhaafka ah, cufnaanta, cimri dhererkiisa, iyo iska -caabbinta daxalka. Laakiin granite sidoo kale waa mid aad u badan - kaliya maahan afargeesle iyo leydi! Dhab ahaantii, Waxaan si kalsooni leh ula shaqeynaa qeybaha granite ee lagu farsameeyay qaababka, xaglaha, iyo qalooca dhammaan kala duwanaanshaha si joogto ah - oo leh natiijooyin aad u wanaagsan.
Iyada oo loo marayo xaaladdeena farshaxanka, meelaha la gooyay waxay noqon karaan kuwo si gaar ah u siman. Sifooyinkaasi waxay ka dhigaan granite maaddada ugu habboon si loo abuuro saldhigyada mashiinka-cabbirka iyo caadooyinka-naqshadeynta iyo qaybaha metrology. Granite waa:
Si go'an u go'an marka la gooyo oo la dhammeeyo
Ust miridhku u adkaysta
Qaybaha Granite sidoo kale way fududahay in la nadiifiyo. Markaad abuureyso naqshado caadooyin ah, hubso inaad dooratid granite faa'iidooyinkeeda sare.
CALAAMADAHA / CODSIYADAHA DHARKA SARE
Dhagaxa loo yaqaan 'granite' ee ay ZHHIMG u adeegsato alaabta taargada dusha sare ee caadiga ah waxay ka kooban tahay quartz aad u sarreeya, kaas oo bixiya iska caabin weyn oo xirashada iyo waxyeellada. Midabadayada Madow ee Sare waxay leeyihiin heerar nuugista biyaha oo hooseeya, taasoo yareyneysa suurtogalnimada cabbirradaada saxda ah ee daxalaysa markaad ku dhejineyso taarikada. Midabada granite -ka ee ay bixiso ZHHIMG waxay keenaysaa iftiin yar, taas oo macnaheedu yahay indho -yaraanta indhaha ee shaqsiyaadka isticmaala taargooyinka. Waxaan dooranay noocyadeenna dhagxaanta annagoo tixgelinayna fidinta kuleylka si aan u dadaalno si aan u yareynno dhinacan.
Marka dalabkaagu u yeero saxan leh qaabab caadooyin ah, gal -galyo la galiyay, boosaska ama farsamaynta kale, waxaad u baahan doontaa inaad doorato qalab sida Black Jinan Black. Qalabkan dabiiciga ahi wuxuu bixiyaa qallafsanaan sare, qoyaan gariir aad u fiican, iyo hagaajin farsamo.
2. Midabka granite -ka ayaa ugu fiican?
Waxaa muhiim ah in la ogaado in midabka kaligiis uusan tilmaamayn tayada jirka ee dhagaxa. Guud ahaan, midabka granite wuxuu si toos ah ula xiriiraa jiritaanka ama maqnaanshaha macdanta, taas oo laga yaabo inaanay wax saamayn ah ku yeelan tayada samaysa wax saxan dusha sare leh. Waxaa jira granite casaan, cawl, iyo madaw oo aad ugu fiican taarikada dushiisa, iyo sidoo kale madow, cawl, iyo dhagaxyo casaan oo gebi ahaanba aan ku habboonayn codsiyada saxda ah. Astaamaha muhiimka ah ee dhagxaanta, maaddaama ay ku saabsan yihiin isticmaalkiisa sida alaab saxan dushiisa, wax shaqo ah kuma laha midab, waana sida soo socota:
■ Adkeynta (leexashada culayska - oo uu tilmaamay Modulus of Elasticity)
Xiro iska caabin
Waxaan tijaabinay waxyaabo badan oo granite ah oo aan isbarbar dhignay maaddadan. Ugu dambayntii waxaan helnaa natiijada, Jinan granite black waa maaddada ugu wanaagsan ee aan waligeen ogaanno. Indian Black granite and South Africa granite are similar to Jinan Black Granite, but their properties physical are less than Jinan Black Granite. ZHHIMG waxay sii wadi doontaa raadinta waxyaabo badan oo granite ah oo adduunka ah waxayna isbarbar dhigi doontaa astaantooda jireed.
Si aad uga hadasho wax badan oo ku saabsan dhagxaanta ku habboon mashruucaaga, fadlan nala soo xiriir info@zhhimg.com.
3. Ma jiraa halbeeg warshadeed oo loogu talagalay saxsanaanta dusha sare?
Warshadaha kala duwan waxay isticmaalaan heerar kala duwan. Waxaa jira heerar badan oo adduunka ah.
DIN Standard, ASME B89.3.7-2013 ama Tilmaanta Federaalka GGG-P-463c (Taarikada Dhulka Granite) iyo wixii la mid ah oo saldhig u ah tilmaamahooda.
Oo waxaan soo saari karnaa saxanka kormeerka saxda ah ee granite sida waafaqsan shuruudahaaga. Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto haddii aad rabto inaad ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heerar badan.
4. Sidee loo qeexaa oo loo qeexaa saxanka dusha?
Flatness waxaa loo tixgelin karaa in dhammaan qodobbada dushiisa ay ku jiraan laba diyaaradood oo is barbar socda, diyaaradda saldhigga iyo diyaaradda saqafka. Cabbirka masaafada u dhexeysa diyaaraduhu waa guudnaanta guud ee dusha. Cabbiraaddan fidsan waxay caadi ahaan xambaarsan tahay dulqaad waxaana ku jiri kara tilmaamidda darajada.
Tusaale ahaan, dulqaadka dulqaadka ee saddexda darajo ee caadiga ah ayaa lagu qeexay qeexidda federaalka sida lagu go'aamiyey qaaciddada soo socota:
Gra Darajada Sheybaarka AA = (40 + dadab labajibbaaran/25) x .000001 "(hal dhinac ah)
Pe Kormeerka Fasalka A = Darajada Shaybaarka AA x 2
Room Qolka Qalabka Fasalka B = Shahaadada Shaybaadhka AA x 4.
Taargooyinka dusha sare ee cabbirka leh, waxaan dammaanad qaadnaa dulqaadka fidsan ee ka sarreeya shuruudaha qeexitaankan. Marka lagu daro fidinta, ASME B89.3.7-2013 & Faahfaahinta Federaalka GGG-P-463c mowduucyada cinwaanka oo ay ka mid yihiin: ku celcelinta cabbirka, sifooyinka maaddada granite saxanka dusha, dhammaadka dushiisa, goobta taageerada, qallafsanaanta, hababka la aqbali karo ee kormeerka, rakibidda galinta dunta ah, iwm.
ZHHIMG taarikada dhagaxa dhagaxa ah iyo taarikada baaritaanka dhagxaanta ayaa buuxiya ama dhaafa dhammaan shuruudaha lagu qeexay qeexitaankan. Waqtigan xaadirka ah, ma jiro qeexitaan qeexan oo loogu talagalay taargooyinka xagal dhagaxa, isbarbaryaacyada, ama afargeesyada sayidka.
Waxaadna ka heli kartaa qaaciidooyinka heerarka kale gudaha DOWNLOAD.
5. Sideen u yarayn karaa duugga oo aan u dheereyn karaa nolosha saxankayga dushiisa?
Marka hore, waxaa muhiim ah in saxanka la nadiifiyo. Siigada waxyeellada leh ee hawada ka soo baxdaa ayaa ah isha ugu weyn ee duugga iyo dillaacga ee saxan, maadaama ay u muuqato inay ku dhex jirto qaybaha shaqada iyo meelaha taabashada googoosyada. Marka labaad, dabool saxankaaga si aad uga ilaaliso boodhka iyo waxyeellada. Xirashada nolosha waxaa lagu kordhin karaa iyadoo la daboolo saxanka marka aan la isticmaalin, iyadoo marba mar la rogrogo saxanka si aag keli ah uusan u helin isticmaalka xad -dhaafka ah, iyo iyadoo lagu beddelayo suufyada xiriirka birta marka lagu cabbirayo suufka carbide -ka. Sidoo kale, iska ilaali inaad ku dhejiso saxanka cuntada ama cabitaannada fudud. Ogsoonow in cabitaanno badan oo fudud ay ku jiraan kaarboon ama fosfoorik, kaas oo kala diri kara macdanta jilicsan oo ka tagi kara godadka yaryar.
6. Immisa jeer ayaan nadiifiyaa saxankayga dusha?
Tani waxay ku xiran tahay sida saxanka loo isticmaalo. Haddii ay suurtogal tahay, waxaan ku talinaynaa in la nadiifiyo saxanka bilowga maalinta (ama shaqada shaqada) iyo mar kale dhammaadka. Haddii saxanku noqdo mid wasakhaysan, gaar ahaan dheecaan dufan leh ama dhegdheg leh, waa in isla markiiba la nadiifiyaa.
Saxanka si joogto ah ugu nadiifi dareere ama ZHHIMG Nadiifiye saxan oo aan biyo lahayn. Doorashada xalalka nadiifinta waa muhiim. Haddii la isticmaalo dareeraha aan kacsanayn (acetone, khafiifiyaha khafiifka ah, aalkolada, iwm) uumi -baxa ayaa qaboojin doona dusha, oo qalloocin doona. Xaaladdan, waxaa lagama maarmaan ah in loo oggolaado saxanka inuu caadi noqdo ka hor intaan la isticmaalin ama khaladaad cabbir ayaa dhici doona.
Xaddiga waqtiga looga baahan yahay saxanka inuu caadi noqdo wuxuu ku kala duwanaan doonaa xajmiga saxanka, iyo xaddiga qabowga. Saacad waa inay ku filnaataa taarikada yaryar. Laba saacadood ayaa laga yaabaa in loo baahdo taarikada waaweyn. Haddii la isticmaalo nadiifiye biyo ku salaysan, waxaa sidoo kale jiri doona xoogaa uumi-bax ah.
Saxanka ayaa sidoo kale hayn doona biyaha, tanina waxay sababi kartaa daxalka qaybaha birta ah ee taabashada dusha sare. Nadiifiyeyaasha qaarkood ayaa waliba ka tagi doona hadhaaga dhegdhega ka dib markay qallalaan, taas oo soo jiidan doonta boorka hawada, oo dhab ahaantii kordhin doonta duugga, halkii ay ka yarayn lahayd.
7. Intee in le'eg ayay tahay in saxanka dusha la hagaajiyo?
Tani waxay ku xiran tahay isticmaalka saxanka iyo bay'ada. Waxaan kugula talineynaa in saxan cusub ama qalabka dhejiska ah ee saxda ah ay helaan dib -u -habeyn buuxda hal sano gudaheed markii la iibsaday. Haddii saxanka dhagaxa dhagaxa ah uu arki doono adeegsi culus, waxaa laga yaabaa in lagu taliyo in la soo gaabiyo muddadaas lix bilood ah. Kormeerka billaha ah ee khaladaadka cabbiraadda soo noqnoqda iyadoo la adeegsanayo heer Elektaroonik ah, ama aalad la mid ah ayaa tusi doonta dhibco soo koraya oo soo koraya waxayna qaadataa dhowr daqiiqo oo keliya in la fuliyo. Ka dib marka la go'aamiyo natiijooyinka dib -u -qiimeynta ugu horreysa, baahinta kala -soocidda waxaa la kordhin karaa ama la gaabin karaa sida la oggol yahay ama looga baahan yahay nidaamkaaga tayada gudaha.
Waxaan bixin karnaa adeeg kaa caawiya inaad baartid oo aad hagaajisid saxankaaga granite -ka.
8. Waa maxay sababta qiyaasaha lagu sameeyay saxankayga dushiisa ay u muuqdaan kuwo kala duwan?
Waxaa jira dhowr sababood oo suurtogal u ah kala duwanaanshaha u dhexeeya habaynta:
Dusha sare waxaa lagu dhaqay xal kulul ama qabow ka hor inta aan la hagaajin, lamana oggolaan waqti ku filan oo caadi laga dhigo
Saxanka si aan habboonayn ayaa loo taageeray
Qorraxda tooska ah ama kulaylka kale ee dhalaalaya dushiisa saxanka. Hubi in iftiiminta dusha sare aysan kululayn dusha
Kala duwanaanshaha heerkulka toosan ee u dhexeeya jiilaalka iyo xagaaga (Haddii ay suurtogal tahay, ogow heerkulka toosan ee tooska ah marka la sameynayo qiyaaseynta.)
Saxanka looma oggola waqti ku filan si caadi looga dhigo shixnadda ka dib
Isticmaalka aan habboonayn ee qalabka kormeerka ama isticmaalka qalab aan la qiyaasi karin
Isbeddelka dushiisa oo ka dhasha xirashada
Ma rabtaa inaad nala shaqayso?
Sax Granite Cube, Isbarbar dhigyada Granite Precision, La taaban karo Epoxy, Qalinka Granit Square Ruler, Sax Granite, Sax Granite dusha sare,